Rooble oo qaadaya tallaabooyin ka dhan ah Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo qaadaya tallaabooyin ka dhan ah Farmaajo
Rooble ayaan wali kasoo dhalaalin doorkiisa siyaasadeed iyo midka hogaamineed, waxaana uu ku dhex dhumay Fahad iyo Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagula taliyay inuu ciyaaro doorkiisa hogaamineed, islamarkaana uu kasoo dhalaalo kaalintiisa siyaasadeed ee dowladda.
Rooble ayaa xalay kulan gaar ah kula yeeshay Muqdisho Musharixiinta Mucaaradka iyo Madaxweyniyaasha HirShabeelle iyo Galmudug, kaasoo lagu siiyay talooyin iyo dhiira-gelin inuu dalka ka samatabixiyo xaaladda uu ku jiro.
Mucaaradka ayaa u sheegay Rooble in Farmaajo uu waqtigiisa dhamaadey, islamarkaana maanta waxba faraha uga jirin, maadaama beesha caalamka ay kahor timid, sidoo kalena ay saamileyda siyaasadeed kasoo horjeedaan.
Tallaabooyinka laga filayo inuu qaado Rooble ayaa waxaa kamid ah inuu ku baaqo shir looga hadlayo arrimaha doorashadda, sidoo kalena uu isku shaandheyn ku sameeyo Gollaha Wasiiradda, isago meesha ka saaraya Wasiiradda la safan Farmaajo, oo Dubbe, Jamaal iyo Xundubeey ay kamid yihiin.
Musharixiinta Mucaaradka oo u badan kuwa kasoo jeeda Beelaha Hawiye ayaa tusiyay Rooble inay fursaddo dahabi ah horyaallaan xilligan dalka uu ku jiro marxaladda adag, waxaana lagu dhiirageliyay inuu ciyaaro doorkiisa, islamarkaana uu qabto doorasho loo dhan yahay.
Farmaajo iyo Fahad ayaa iyaguna maleegaya qorsho kale oo ay uga hortagayaan ajandaha mucaaradka ay usoo dhiibeen Rooble, waxaana aad loo hadal hayaa in Gollaha Shacabka Sabtida kalsoonida kala noqon doonaan Ra'iisul wasaaraha.
Siyaasadda dalka ayaan wali af iyo ur lahayn, iyadoo xaaladda ay tahay mid cakiran oo aan la saadaalin karin waxay noqon doontoo, iyadoo saan-saan coleedeed ay ka jirta Muqdisho.